Afafazo mandritra ny fampinono
Tsy misy vehivavy mihinam-baraka dia tsy manan-kery amin'ny fampiasana sakafo tsy misy dikany. Inona no tokony hataoko raha reraka tampoka ny reniko, kitapo marefo, tazo? Andeha hojerentsika ny fomba fitsaboana io toe-javatra io sy ny hoe azo atao ny mamelona zaza iray mandritra ny poizina.
Famantarana ny sakafo misy poizina mandritra ny fampinono
Amin'ny alalan'ny soritr'aretina, ny reny dia afaka mahatakatra izay mitranga amin'ny vatany. Ny rehetra dia afaka manomboka tampoka miaraka amin'ny tabilao matevina, miverimberina sy miverimberina. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, misy ny fanaintainana amin'ny tsinay sy ny fahalemena ankapobeny. Raha ambony noho ny halaviran-danja ny poizina, dia miakatra ny mari-pana.
Ny fihinana sakafo ara-pananahana mandritra ny fampinonoana dia tsy mahazatra, indrindra raha tsy miraharaha ny fitsipiky ny fahadiovana ny vehivavy:
mihinana voankazo, legioma, voankazo tsy voatsabo;
Mandany sakafo izay voatazona mandritra ny fotoana lava amin'ny toe-pahasalamana tsy mety;
tsy manana fahazarana manasa tanana amin'ny savony alohan'ny hisakafo.
Ary ahoana raha misy poizina manapotipotika?
Raha miteraka henjana ny poizina, dia tsy afaka manao izany ianao raha tsy hiditra hopitaly. Ao amin'ny hopitaly dia hentitra ny marary. Amin'izao fotoana izao dia mila mijanona ny fampinonoana, satria ampiasaina ny fitsaboana antibiotika.
Raha mahafa-po ny toe-javatra, dia afaka mitantana tsy miankina an-trano ny reniny, tsy manala ny zaza amin'ny tratra. Ny poizina izay manafika ny vatany dia tsy miditra amin'ny ronono ary tsy manisy ratsy ny zaza. Fa amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny mandinika ny fepetra fiarovana maika - tsara ny manasa ny tananao alohan'ny fifandraisana amin'ny ankizy, misorata ara-potoana matetika, mametra ny fialan-tsasatra sy ny fehiloha, satria ny tovovavy dia mahazo mankany amin'ny zaza.
Noho ny fanaraha-maso ny sakafo amin'ny famonoana sakafo amin'ny maman?
Satria ny antibiôtika dia tsy voatery halefa amin'ny fanamainana ara-tsakafo maotina, fa ny fotoana sy ny fitsaboana ara-pahasalamana ihany no takiana. Izao no azonao atao rehefa misy poizina amin'ny fampinonoana tsy misy dokotera:
Maloiloy. Izy dia ho voavonjy amin'ny fisotroana vita avy amin'ny dill sy fennel, ary koa ny dite maitso. Ilaina ny misotro rano farafahakeliny araka izay azo atao mba hialana haingana ny toxins ary hameno ny vatana amin'ny vahaolana amin'ny rano Regidron na mineraly.
Mandoa. Ny fampijaliana ny reny mandritra ny fampinono dia matetika misy ranomody be dia be. Mba hisakanana azy, tsy maintsy misotro ara-bakiteny eo ambony sotro ianao, isaky ny minitra vitsivitsy. Tsy azo ihodivirana ny zava-mahadomelina.
Ny aretina ao amin'ny kibo. Ny fanafody enti-milaza ny zaza tsy ampy taona dia ny te-shpa sy ny kamia kely ihany.
Aretim-pivalanana. Azonao atao ny mitondra tabilao misy rano miaraka amin'ny fanampian'ny vondrona isan-karazany. Smecta, rakitrandraharahan'antoka, Polysorb ho an'ny fanesorana ranon-javatra. Azonao atao ny mandray Ftalazol na Nifuroxazide. Ny fikajiana ny mikroflora dia mitaky tariby na Yogurt.
Alohan'ny hanombohan'ny fitsaboana, dia ilaina ny fialambolimbary, izay hanampy amin'ny famoahana haingana ireo poizina izay nahatonga ny poizina. Ny sakafo amin'izao fotoana izao dia tokony hanafoana ireo vokatra izay miteraka fanandramana. Mampiseho ny famarotana vary na ny valala avy ao aminy ao anaty rano, potika sy croutons mashed. Raha vao mahatsapa ny fanatsarana ny vehivavy iray dia afaka mihamitombo tsikelikely ny sakafo.
Ahoana no hanehoana ny tazomoka amin'ny tanana - torohevitra momba ny fampinonoana
Afaka mandeha any amin'ny bandro ve aho amin'ny fampinonoana?
Fofona ho an'ny reny mitaiza
Tokony handroana an'i Bepanthen ve aho alohan'ny sakafo?
Ny fandinihana ny ronono momba ny ronono - ny momba ny karazana fikarohana rehetra
Fanalefahana ny tendron'ny Achilles
Tranobe mitandahatra indroa
Na azo atao ny mofomamy ronono hohanina?
Ny tsindry mavesa-danja sy ny taham-pon'ny fo - ny antony
Mamelatra ny ranjony amin'ny zaza vao teraka
Ny ravin-kavoana dia tsara sy ratsy
Planks avy amin'ny boards
Vehivavy ambany kiraro
Ireo saka tsara indrindra